इटहरीमा पनि बालिका बलात्कार गुपचुप: यस्तो छ घटना ! - inaruwaonline.com
इटहरीमा पनि बालिका बलात्कार गुपचुप: यस्तो छ घटना !
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २०, २०७४ समय: ९:४०:५९
इटहरी, २० माघ । प्रहरीले बलात्कारका घटना गुपचुपमै मिलाएर अपराधीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंको दरबारमार्गकै जस्तो घटना पूर्वको इटहरीमा भएको खुलेको हो।कथित प्रेमी र उनका साथीबाट होटलमै बलात्कृत भएकी १४ वर्षीया बालिकाका अभिभावकलाई स्थानीय प्रहरीले उल्टै धम्क्याई ‘मिलापत्र’ गराएको घटना करिब एक महिनासम्म कसैले सुइँकोसम्म पाएन । प्रहरीकै माथिल्लो निकायमा जब यो सूचना चुहियो, बल्ल घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाइयो।
इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीको उक्त सन्देहास्पद क्रियाकलापमाथि छानबिन गर्न प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख एआईजी पशुपति उपाध्यायले अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी हरिबहादुर पाललाई खटाएपछि घटनाले अर्कै मोड लिएको हो। एसएसपी पालले पीडित बालिकासँग बयानसमेत लिई प्रमाण जुटाएर माघ १२ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइसकेको खुलेको छ।
तर, बलात्कारका अभियुक्त धरानका जोकम लिम्बु र विराटनगरका मनीष श्रेष्ठ प्रहरीकै लापरबाहीले फरार भइसकेका छन्। उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रहरीमाथि समेत ‘छानबिन भइरहेको’ भन्दै कुनै कारबाही गरिएको छैन।
बालिकाको बयानअनुसार सामाजिक सञ्चालबाट घनिष्ठता बढेका धरानका लिम्बुले १४ वर्षीया ती बालिकालाई पुस १६ गते अंग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन घुम्न जान प्रस्ताव गरे । उनले स्विकारिन् । इटहरीचोकमा उनीहरूको दिउँसो भेट भयो । कार लिएर आएका जोकमले साथी मनीषलाई पनि ल्याएका रहेछन् । तीन जना इटहरीको ‘चिन्तन चौतारी’ रिसोर्टमा बसेर गफ गरे।
उक्त मितिमा मनीष बसेको कोठा नम्बर ११२ राजकुमारका नाममा ‘बुक’ गरिएको छ । ठेगाना विराटनगर र दुई जना बस्ने लेखिएको छ । तिनमा पुरुष र महिला, नातामा साथी खुलाइएको छ । यसले उनले कोठा लिँदै ती बालिकासँग रात बिताउने नियत राखेको र नामसमेत नक्कली राखेको पुष्टि भएको छ।
‘मैले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि उसले जबर्जस्ती बलात्कार गर्‍यो’, बालिकाले प्रहरी जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् । बलात्कारपछि उनलाई मनीषले जोकमकै कोठामा पुर्‍याइदिएको थियो । उनले ‘चिन्ता नलेऊ, म तिमीलाई स्विकार्छु’ भन्दै रातभर आफैंसँग राखेका थिए।
विक्षिप्त अवस्थामा पुगेकी बालिका भोलिपल्ट घर नगई साथीकहाँ गइन् । यसबारे थाहा पाएपछि करिब एक सातापछि उनलाई लिएर बाबुआमा इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। प्रहरीले जोकमलाई झिकायो तर मनीषलाई ल्याएन । घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न दबाब दियो। ‘मुद्दामामिलामा धेरै पैसा खर्च हुन्छ । फेरि भोलि आरोप प्रमाणीत नभए आफैं जेल जानुपर्छ भने,’ बालिकाकी आमाले भनिन्, ‘त्यसपछि होस् है भनेर हामी मिल्न राजी भयौं । मुद्दामामिलामा किन फस्नु भनेर सहमतिपत्रमा ल्याप्चे लगाइदियौं । पुसको थाम्नै नसकिने हुस्सु र सिरेटो चलेको दिन थियो, कागजमा ल्याप्चे लगाएर त्यो उनीहरुले नै लगे, हामीलाई केही दिएनन्।’ सामान्य आर्थिक हैसियतका बालिकाका बाबुले पनि मुद्दामामिलामा खर्च गर्न पैसा नभएकाले मिलापत्र गर्न बाध्य भएको बताए।
इलाका प्रहरीका प्रमुख डीएसपी सञ्जय राउत विदामा गएका बेला इन्चार्जको जिम्मा पाएका इन्सपेक्टर चिरञ्जीवी दाहालले दबाबपूर्ण तरिकाले मिलापत्र गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार ‘जसरी पनि मिलाउन’ उनलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विद्यानन्द माझीले निर्देशन दिएका थिए। स्रोत भन्छ, ‘यसमा उच्च राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेल दुवै जोडिएको छ।’
स्रोतका अनुसार यसलाई मिलाउन ‘बिचौलिया’ सक्रिय भएका थिए । तीमार्फत पीडित पक्षलाई समेत रकम दिइएको बताइए पनि पीडितका अभिभावकले ‘एक रुपैयाँ पनि नलिएको’ बताए। आजको कान्तिपुरमा मुख्य खबर छ।